UHannibal (okanye uHannibal Barca) wayeyinkokeli yemikhosi yempi yaseCarthage eyayilwa neRoma kwiMfazwe yesiBini yePunic . UHannibal, owayedla ngokugqithisa iRoma, wayebhekwa njengowutsha olukhulu lwaseRoma.
Imihla yokuzalwa nokufa
Ayaziwa, kodwa uHannibal wacingelwa ukuba wazalwa ngo-247 BCE waza wafa ngo-183 BCE. UHannibal akazange afe xa elahlekelwa yimfazwe neRoma - kwiminyaka kamva, wazibulala ngokutywala ubuthi.
WayeseBhitiniya, ngelo xesha, kwaye engengozini yokukhutshwa eRoma.
[39.51] "Ekugqibeleni [uHannibal] wabiza ubuhlungu obunokuhlala ekulungele ukuba lube ngxamnye nxamnye noxinzelelo." Wathi, "Masikukhulule amaRoma ngokuxhalabisa abaye bafumana ithuba elide, ekubeni becinga ukuba uzama ukunyamezela kwabo ukulinda ukufa kwabantu abadala .... '"
Utshutshiso oluphambili lwe-Hannibal eRoma
U-Hannibal waphumelela emkhosini wokuqala, eSaguntum, eSpeyin, wanciphisa i-Second Punic War. Ngaloo mfazwe, uHannibal wayekhokela imikhosi yaseCarthage kwiAlps ngezindlovu waza wafumana ukunqoba kwempi emangalisayo. Nangona kunjalo, xa uHannibal elahlekile kwi-Battle of Zama, ngowe-202, uCarthage kwafuneka ayenze nzima kumaRoma.
Ukubalekela eNyakatho Afrika kwiAsia Minor
Ngexesha elide emva kokuphela kweMfazwe yesiBini sePunic, uHannibal washiya iNtshona Afrika e-Asia Minor. Wayekhokelela uAntiochus III waseSiriya elwa neRoma, engaphumeleli, kwiMfazwe yaseMagnesia ngo-190 BC
Imigaqo yoxolo yayiquka ukunikela uHannibal, kodwa uHannibal wabaleka eBithynia.
I-Hannibal Uses Snaky Catapults
Ngomnyaka we-184 BCE imfazwe phakathi kweKumkani Eumenes II yePergamo (r. 197-159 BCE) kunye noKumkani Prusias waseBithynia e-Asia Minor (c.228-182 BCE), uHannibal wayengumphathi weenqwelo zeBithynian. U-Hannibal wasebenzisa iintsimbi zokuphonsa izimbiza ezizele iinyoka ezinobuthi kwiinqanawa zeentshaba.
I-Pergamese yaxhalaka yaza yabalekela, ivumela abaseBhityni ukuba bazuze.
Intsapho kunye neMvelaphi
Igama elipheleleyo likaHannibal nguHannibal Barca. UHannibal uthetha "uvuyo lukaBhahali." Barca lithetha "umbane." I-Barca iphinda ibhalwe uBarcas, uBarca noBharaki. UHannibal wayengunyana kaHamcarcar Barca (d.228 BCE), umkhokeli wemikhosi weCarthage ngexesha leMfazwe yokuqala yePunic apho wahlulwa ngo-241 BCE UHamcarcar wenza isiseko seCarthage esezantsi kweSpeyin, esinceda sichaze i-geography kunye ne-transalpine adventure yePhondo yesiBini sePunic. Xa uHamcarcar efile, umkhwenyana wakhe u-Hasdrubal wathatha, kodwa xa uHasdrubal efile, iminyaka engama-7 kamva, ngo-221, umphathi omkhulu we-Hannibal wemikhosi yaseCarthage eSpain.
Kutheni uHannibal wayebhekwa njengenkulu
UHannibal wahlala edume ngokuba ngumdlali onamandla kunye nomkhokeli omkhulu wempi nangona emva kweCarthage yalahlekelwa yimpi yePunic. Imibala kaHannibal ingcamango eyaziwayo ngenxa yokuhamba kwakhe kunye neendlovu eziseAlps ukuba zijongene nomkhosi wamaRoma . Ngethuba lamaqela aseCarthage ayigqibile ukuwela kweentaba, wayenamaqela angaba ngu-50 000 kunye nabamahhashi angama-6000 ekufuneka abhekane nawo aze anqobe ama-200,000 amaRoma. Nangona uHannibal ekugqibeleni walahlekelwa yimfazwe, wakwazi ukuhlala kwilizwe leentshaba, ekulweni iminyaka eyi-15.
> "I-Cambridge History yeGrike yamaGrike kunye namaRoma", ngoFilipu AG Sabin; UHans van Wees; UMichael Whitby; Cambridge University Press, 2007.
Kutheni Umntwana uMoses Wayeka Ekhokheni kwiBulrushes yeNayile?
Ngaba uNapoleon Bonaparte Mfutshane?
Ngaba iiVikings zivutha iinqwelo zeekhompyutha?
Umntu woMntu omnyama ngu-Oliver Goldmith
I-Biography kaMadame CJ Walker
Ukujonga kwii-Triangle UFOs
Shahaadah: Isibhengezo Sokholo: iNsika ye-Islam
Isakhiwo sokwakhiwa kwezivakalisi kunye namaCandelo alandelayo
Umkhosi waseBabon Ukuhlonipha uMama omnyama